Phezu kokuthola imfundo yesibili ephakeme, njengoba umthetho, semali ukuqeqeshwa isikhathi ezinikele sokusebenza ngokuzijamela abafundi. ukuqeqeshwa Modular kangcono labo asebevele besebenza okukhethekile yabo, njengoba omunye izici ezithile ke - yikhono self-ukuthuthukiswa we indaba ngezinga labo kuwo wonke umuntu.
Kungenjalo-ke ubizwa nangokuthi "ukuqeqeshwa block-Modular", ngoba okuqukethwe ngendaba engaphansi cwaningo sehlukaniswe Imininingwane amabhlogo nge nenombolo ye ohambelana amahora ngamunye. Indaba okuqukethwe kungahle esetshenziswa umfundi ngamunye ku ngemazinga lamatsatfu: ukujula, ngokugcwele futhi mfushane. Oqeqeshwayo Ungahambisa ngaphakathi module komunye ezingeni lolwazi kwenye. Umphumela bazohlolwa ngokuhlola ekupheleni kwesinye nesinye isihloko.
ukuqeqeshwa Modular predetermined algorithm umsebenzi uthisha:
1. Funda izinkulumo isibuyekezo.
2. Kuphethe umzimba esisebenzayo.
3. Inhlangano umsebenzi ezizimele.
4. Ukuhlola sokuthuthukiswa okuqukethwe module.
Modular ukuqeqeshwa uhlelo isikisela ukuthi umfundi ayikwazi ukuqala ukufunda izinto ezintsha kuze master odlule. Kungaphinde emakilasini ngale ndaba, eye wahlala ezibalulwa kanjena ngokufanele, nabafundi bezinye ukwandisa isikhathi sabo sokuzijabulisa cwaningo futhi nizuze ulwazi nge abafundi lomunye Yiqiniso noma kuhlolwe njengenhlangano umfundi zangaphandle. ukuqeqeshwa Modular kuhilela ukuhlolwa ulwazi, okuyinto eyenziwa iqoqo isilinganiso amaphuzu, okuyinto ingatholakala ngokuba umsebenti wetemlomo, ngomsebenzi, lokusungula, emisetjenzaneni yokuzijamela futhi ukusiza abanye abafundelwayo. izikolo Hlukanisa kukhona ngoba Sivivinyo ngasinye onesihluthulelo futhi lemisiwe of ulwazi. Amaphuzu zanqwabelana, ezifingqiwe, futhi acabangele zonke izinhlobo umfundi nokuhlanganyela emsebenzini ngesihloko.
Mfundisi for ukuqeqeshwa Modular okudingeke ukuba akucabange kusengaphambili hhayi kuphela isihloko lapho ukuzikhandla kwakhe isikhathi kufaneleka, kodwa futhi ukuthuthukisa sizibeka iyunithi ngalinye, lapho ufuna kutholakale izinga umfundi kahle material nokuqukethwe. ukuqeqeshwa ngamunye isakazwa:
- ngesikhathi ukuthuthukiswa zezihloko umfundi module;
- degree of self-ucwaningo impahla;
- on the izindlela kanye namasu lokufundisa umfundi ngamunye (noma abafundi iqembu);
- ukukhethwa izindlela ukulawula ngokuzeleko ekuhloleni ulwazi.
ukuqeqeshwa Modular sekukhona esikhundleni umbono owamukelekayo wokuthi izincwadi kwathatha isihloko esisha Kwenziwa ngokuqinile sithembele isikhathi esichithwa ukufunda kunokugxila ezintweni izinga material yokufunda. Umehluko oyinhloko phakathi yokufunda esekelwe amamojuli yilezi:
- kulungiselelwa Okuqondiwe ngayinye block ekhethiwe kanye nentuthuko yayo wonke amaqembu abafundi, kodwa ngezinga labo;
- ukuxhumana umfundisi ukwenziwa uhlobo sokubambisana kungenzeka ukuxoxa izindlela yentuthuko impahla, kuvisisa ngokuhlanganyela nokusesha izinhlobo ngokutadisha nangokuphila kufinyeta impahla, ukuthola okuqukethwe okuqukethwe siqu module, okuyinto ezithakazelisa kakhulu ukufunda ngokunembile lokhu umfundi, okusho ukuzivocavoca indlela siqu ;
- ukugcizelela esiphezulu ekuqeqesheni ivuliwe self-yokufunda, ukuzithiba, self-ngcono.
ukuqeqeshwa Modular angase kuhlanganiswe zonke izinhlobo eziphambili kakhulu ubuchwepheshe nolwazi ekuzuzeni: a indlela obunobuhixihixi, ukuthuthukiswa kancane kancane izenzo engqondo, zahlelwa ukuqeqeshwa. Okwesibili imfundo ephakeme kuqala ukuba ngokuphelele ezahlukene kusukela ngosuku lokuqala, njengoba eyashukumisela kakade ukuze uthole noma uthuthukise amakhono e okukhethekile, abafundi ahloselwe nenani elikhulu inzuzo ulwazi, izinga lokuphila kwabo kanye inkositini ikhono ngempumelelo bakwenze.
Indlela yokuthola ngesivinini esingamakhilomitha
Ukuqeqeshwa ukushayela kokuqala
Kanjani ukuba babhale indaba-agumenti noma ukusiza abathweswa iziqu esizayo
Imikhiqizo cwaningo e isitashi kokuqukethwe. Okunoshukela isitashi
Playground enkulisa ngezandla zabo
Izitolo "TsentrObuv" e Moscow, ikheli, Amahora okuvula
Yikuphi okuhle, uma kubhaliwe umshwalense, ungase ukhokhe
Uwoyela Fish - ikhambi elilodwa ngezinkinga eziningi!
Kanjani ukuyenga intombazane. Amathiphi kusuka ubuso sowesifazane
Izidakamizwa "Mikostop": ukubuyekezwa, amafomu, imiyalelo
Yenza eyakho isilinganiso multivarok
Umdlavuza wamaphaphu duodenum: owokuqala izimpawu, uphethwe, ukuphathwa, onalesi sifo
Kuhle izimonyo professional ubuso: Izibuyekezo cosmetologists, abakhiqizi ukubuyekeza